တရစ်ပြီးတရစ် ပူနွေးလာတဲ့ မြေကမ္ဘာမှာ
ငါဟာ အနေကြာ.. ပြီး.. အပူတွေကြာ
အခုတော့ အပူလူသားလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ပြီ ။
ထူးမခြားနားပဲ ဇာတ်သိမ်းခဲ့ပြန်ပြီ ။
ဒီ… ကဗျာကို ငါချရေးနေမိ
“၃၆၅ လ” ထပ်ပြီး နေဖို့ မျှော်လင့်မနေချင်တော့ဘူး
ကွန်ပြူတာမှာ အန်းတား (enter) တချက်ခေါက်လိုက်ရုံနဲ့
အလိုလေး ကိုယ့်လူတို့ စဉ်းစဉ်းစားစားတော့ လုပ်ကြပါ
တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် ကျောချမ်းလွန်လွန်းလို့ ။
ကမ္ဘာမြေကိုလည်း အားနာလှပါပြီ ။
ငါတို့က နူရာဝဲစွဲ ။
“ကံကြမ္မာ” ဆိုတာကို သေချာနားလည်ဖို့ အရင်ကြိုးစားရမယ်
လွတ်အဘစ် ပစ်ချား (Lookabig picture)
၂၁ ရာစုမှာ ရှင်သန်နိုင်ဖို့
နည်းနည်းတော့ ၀ိရိယ စိုက်ထုတ်ဖို့လိုတယ် ။
အညစ်အကြေးတွေလည်း စိတ်ရှိလက်ရှိ စွန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီ
ကမ္ဘာမြေလည်း စိတ်ရှိလက်ရှိ ညစ်ထေးနေခဲ့ပြီ ။
သေမဲ့နေ့ကို စောင့်နေရ ပုံမျိုးနဲ့
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှား အသစ်တွေကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့
လုံလောက်တဲ့ ကိုယ်ခံအား မရှိတော့
မနက်ဖြန်မှာ မွေးဖွားလာမဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ သနားမိပါရဲ့ ။
ဟောလိဝုဒ်က ဘရက်ပစ်နဲ့ဂျိုလီတို့ စုံတွဲသတင်း
ဘရစ်တနေစပီးယားရဲ့အသက် ၁၆နှစ်ညီမလေး ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့သတင်း
တစ်သောင်းငါးထောင်ကျော် အမေရိကကို ထွက်ခွာ
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘယ်နေရာမှာပဲ ရောက်နေနေ
ကမ္ဘာ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မူမှာ တာဝန်ကြေရမယ်ဟေ့ ။
ပိုပြီး ရင့်ရော် ခက်ထန် ကြမ်းတမ်း
ကမ္ဘာမြေဟာ လုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေး ရှိတန်ကောင်းပါရဲ့ ။
နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုလိုက်ကြဦးစို့ရဲ့ ။ ။
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by Nyein Chan Aung at 5:46:00 PM3comments
နှင်းတွေကြောင့်ပဲ မျက်ပင်တွေ သေဆုံးနေကြရ။
ကမ္ဘာမြေမှာ သဘောကောင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးလှပတဲ့
မိန်းမပျိုများ၊ အရည်ရွှမ်းတဲ့ သစ်သီးဝလံများ
သူမကို ဒူးကွေး ဦးညွှတ်
နှင်းတွေကတော့ အညှိုးတကြီး ကျနေဆဲပဲ။
စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ ပန်းမပွင့်ဘူး
စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ခံစားချက်မရှိဘူး
ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသား မရှိရင်
မူရှာရတ်လား၊ အယ်ကိုင်းဒါးလား၊ တာလီဘန်လား
သံမဏိ သူရဲကောင်း ဘူတိုရေ..
မျက်ပင်တွေ၊ နှင်းစက်တွေ၊ သစ်အယ်ပင်တွေ
ဘူတိုကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ အားလုံးနဲ့အတူ
ချစ်စွာသော ဘူတို။ ။
27 ရက်နေ့ည (9:20) နာရီအချိန်တွင် ဘန်ကောက်တွင်အခြေစိုက်သော The Nation သတင်းစာမှ ကျနော့် ဆဲလ်ဖုန်းသို့ message တစ်ခုဝင်လာသည်။ ဘူတို လုပ်ကြံခံလိုက်ရပြီ၊ သေသွားပြီတဲ့။ ကျနော် အံ့သြခြင်း ကြီးစွာဖြင့် နေရာမှာပင် မင်သက်သွားမိပါတယ်။ ကျနော့်ဆွေမျိုးတစ်ယောက်၊ ကျနော့် ခေါင်းဆောင်တစ် ယောက်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ရဲဘော်တစ်ယောက်၊ ကျနော် ချစ်မြတ်နိုးရသူ တစ်ယောက် ရဲ့ နာရေး သတင်းကို ကြားလိုက်ရ သလို ကျနော် ၀မ်းနည်း ပူဆွေးခဲ့မိပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ မူဆလင်ဘာသာဝင်များ ဒုတိယအများဆုံး နေထိုင်ရာ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှာ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် နှစ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Benazir Bhutto ဟာ Rawalpindi မြို့ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်မှာ အသေခံ ဗုံးခွဲသမားတစ်ဦးရဲ့ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် မူကြောင့် လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်း တို့မှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိပြီး၊ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေ (6) နာရီခန့်တွင် ကျဆုံးသွားခဲ့ ရခြင်းပါ။ သူမကျဆုံးမူဟာ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသော ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများ အတွက် လွန်စွာကြီးမားသော ဆုံးရူံးမူကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက် ၀ါဒရဲ့ ရွံရှာစက်ဆုပ်ဖွယ် ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်တယ်။
၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by Nyein Chan Aung at 4:29:00 PM4comments
ကျနော့်ကဗျာ “ကချေသည်” မှာ “အမည်မသိ” နဲ့လာရေးသွားတဲ့ Comment ပါ။ “ကချေသည် စကား” တဲ့။ ဒီ Comment က ကျနော်ခံစားလို့ ရတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကဗျာ အဖြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ အမည်မသိ ဆရာခင်ဗျား Comment အတွက် ကျေးဇူးပါနော်..
ထွက်ခွာသွားရတော့မှာ ... ။
ခွဲရမှာကို ကြိုသိနေလို့ပါ ... ။
မင်း မြင်လှည့်ပါ့ကွယ် ... ။
Posted by Nyein Chan Aung at 10:44:00 AM 1 comments
မင်းမျက်နှာလေး ငေးကြည့်နေရုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံပါတယ်
ငါသေချာတယ်၊ ငါ့စိတ်တွေ ဖြူစင်သန့်ရှင်းနေပါတယ်
မင်းအပြုံးမှာ စိတ်ရှိလက်ရှိ ကျဆုံးချင်တယ်
မင်းက ရိုးရာအစဉ်အလာကို ထိမ်းသိမ်းသူ
မင်းကြွယ်ဝတဲ့ အနုပညာနဲ့ တာဝန်ကျေပွန်ချင်သူ
ငါက မင်းချစ်တဲ့ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးသူ
တို့နှစ်ယောက်အတွက် ဒီလောက်ဆိုရင် ပြည့်စုံမှာပါ
အချစ်ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံမူမှာ ငါကျေနပ်ပါရစေ ။ ။
၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by Nyein Chan Aung at 4:11:00 PM3comments
ပြီးတော့ ငါ့ခေါင်းထဲမှာ မရေမရာ
ပြည်တော်ပြန် ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ရောယှက်ယက်ဖောက်
ဦးလေးဟိုခင်ဗျာ ကျနော့်ကို တော်လှန်တဲ့ဝိညာဉ်ပူးကပ်ပါ
ဒါပေမဲ့ ဦးလေးဟိုလို အထီးကျန်မဖြစ်ချင်ပါ
ငါ့ကို အေးမြပါ၊ ဖျန်းဆွတ်ပါ
ငါ့ရဲ့ ပြတင်းတံခါးတွေ ပြန်ဖွင့်ပါရစေ
စွန့်လွှတ်ဖက်တွယ်မူက ဘ၀ကို နာကျင်စေတယ်
ကိုယ်လွတ်ရုန်းထွက်မူက တစ်ဘ၀စာအတွက် ပြီးပြည့်စုံတယ်
အိမ်ယာထူထောင်ခြင်းဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်တခု
အညံ့ခံသူတစ်ယောက်ပြောတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားကို မကြားပါရစေနဲ့
ပစ္စုပ္ပန်မှာတော့ ငါဟာအလဲလဲ အကွဲကွဲ
မင်းဟာငါ့ရဲ့ အတိတ် ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်
နှင်းရေ ငါ့ကို ငြိမ်းသတ်ပါ
တိုင်းရေး ပြည်ရေး ငါ့ကိုဘာမှ မဆွေးနွေးကြပါနဲ့
ငါအိပ်ရေး ၀၀ အိပ်ပါရစေ
ကျနော့်ရဲ့သတို့သမီး “နှင်းပွင့်ဖြူ” ကို မွေးဖွားသန့်စင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အငမ်းမရ ဆာလောင်နေတဲ့
မအောင်မြင်သေးတဲ့ အညတရတော်လှန်ရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ။
၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by Nyein Chan Aung at 12:28:00 AM5comments
သတင်းများစုဆောင်းမူကို http://roadtofreedom2008.blogspot.com/ တွင်ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားပါမည်။ ဤဘလော့်တွင် ကဗျာများ ဆက်လက်၍ ရေးသားပါမည်။ ဆက်လက်အားပေးကြပါအုံး...
I will stop posing news collection on this blog, instead i will post them on http://roadtofreedom2008.blogspot.com/. On this blog i will continue to post poems and hope to enjoy your continuous support.
Posted by Nyein Chan Aung at 4:12:00 PM0comments
News collection - Congressional Gold Medal Awarded to Aung San Suu Kyi; Mr Gambari to report Burma issue at UN general assembly
- စက်မူ (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း၏ ဆွမ်းကို သပိတ်မှောက်၊ စင်ရော်မောင်မောင်၏ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဇာတ်ကားအတွက် သံဃာများ အရိုက်မခံ ဤနေရာမှာပါ
- ကိုထင်ကျော်ကို အင်းစိန်ထောင် သီးသန့်တရားရုံးတွင်ရုံးထုတ်တော့မည် ဤနေရာမှာပါ
- ပဲခူးတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်း သုံးရက်တခါသာ မီးလာ ဤနေရာမှာပါ
- ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကြံစက်ရုံကြောင့် တောင်သူများ အခက်ကြုံနေ ဤနေရာမှာပါ
- တောင်ကုတ်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကို စစ်အစိုးရ အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်စစ်နေ ဤနေရာမှာပါ
- ဒီကေဘီအေကားပစ်ခတ်ခံရ လူ (၈) ဦးပွဲချင်းပြီးသေ ဤနေရာမှာပါ
- နအဖလေယာဉ်ပျက်ကျ ပြန်ပြီ ဤနေရာမှာပါ
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး အင်္ဂနေ့ဆုတောင်းပွဲများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေ ဤနေရာမှာပါ
- ကိုကျော်ထင်ကို ရုံးမထုတ်တော့ပဲ အင်းစိန်ထောင်ထဲတွင် စစ်တော့မည်၊ သံတမန်များအပါအ၀င် ပြည်သူလူထု အများအပြားစောင့်နေကြ ဤနေရာမှာပါ
- အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်များ စစ်ကိုင်းတိုင်း တမူးတွင် ဖြန့်ဝေ Link here
- မစ္စတာဂမ်ဘာရီ အမေရိကန်သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှနှင့် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် အစီရင်ခံတင်ပြ Link here
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွှေတံဆိပ်ဆု ချီးမြှင့် Link here
- စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးခံသံဃာအချို့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည့်အပေါ် ပြည်ပရောက် သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့၏ တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက် Link here
- ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို သာမန် ရာဇ၀တ်သားများနှင့် တွဲထားသည့်အပေါ် တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက် Link here
- ကိုထင်ကျော်ကို အင်းစိန်ထောင်သီးသန့်တရားရုံးတွင် ပြောင်းရွှေ့ရုံးထုတ် Link here
- ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သံဃာတော်များ တပြိုင်နက်လှုပ်ရှားရန် စီစဉ်နေ Link here
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကွန်ဂရက်ရွှေတံဆိပ်ဆု ချီးမြှင့်ရန် အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ် Link here
- ဒီကေဘီအေကား တိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် လူ(၂) ဦးသေဆုံး Link here
- ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိရန်တောင်းဆို Link here
- ကမ္ဘောဒီးယားတွင် သံဃာနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွား Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 6:34:00 PM0comments
ကျောင်းသားတွေအတွက် ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကမ်ပိန်းကဗျာတွေပါ။ ကဗျာ (၁၁) ပုဒ်ကို ရေးသားတာ တစ်ရက် ကျော်ကျော်ပဲ ကြာခဲ့ပါတယ်။ စကားလုံးတွေကတော့ လှပမနေပါဘူး၊ ကာရံမပါတဲ့ ပေါက်ကွဲ သံစဉ်တွေပါ။ သေချာတာကတော့ ကဗျာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ မျက်မှောက်ကာလကို ထင်ဟပ်တယ်။ လက်ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို ကိုယ်စားပြုထားတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒီကဗျာတွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လက “မုတ်သုန်အတွေး” ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ပရ၀ုဏ်တွေမှာ ပါ။
စိန်စီသောည [သို့မဟုတ်] လူ့ငနွားကြီးသန်းရွှေသို့…..
နွားကြီးမိသားစုက ဟင်းခွက် တစ်ရာနဲ့ပွဲတော်တည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ လက်ဖွဲ့ရသတဲ့
နွားကြီးနင်တို့မိသားစု မကြာခင် ဒုက္ခလှလှတွေ့မယ်။ ။
နေပြည်တော် (သို့မဟုတ်) ငရဲပြည်မှ အရိုးတွန်သံ
တိုင်းပြည်ကို “ချောက်” ထဲဇွတ်အတင်းဆွဲချသူများ
“ကြောက်ပြေး” ဒါမှမဟုတ် မူလအတိုင်း
လူထု “ခဲ” နဲ့တွေ့တော့မှ နင်တို့ခွေးပြေးမှားလိမ့်မယ်။
အခုတော့ “ခွေးရူးကောင်းစား တစ်မွန်းတည့်” ပေါ့။ ။
ကြိုင်ကြိုင် (သို့မဟုတ်) သားများမိခင်
သန်းရွှေရဲ့ ရှုမညီးတဲ့ ချစ်မယားကြီး။
ငပေါကြီးသန်းရွှေဟာ ဒုတိယမြောက် လင်။
ကံဆိုးသူ သန်းရွှေကြီး မဲကျသွားသတဲ့
အဲဒီကတည်းက ကြိုင့်အလိုကျ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
တကယ်တော့ “နွားငတ်ရေကျ” ဇာတ်လမ်း
ငပေါကြီးတစ်ယောက် မိန်းမရကိန်း လုံးဝမမြင်။
နွားငတ်ကြီး အရမ်းမရ ချစ်လိုက်ရှာတာ
ကြိုင့်အလိုကျ၊ ကြိုင့်သဘော ဇာတ်လမ်းမှာ
ဗေဒင်၊ နက္ခတ်၊ ယတြာ ၀ါသနာကြီးတဲ့ ကြိုင်ကြိုင်
တလောကပဲ မင်းသား “လူမင်း” နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်သေး။
မဟုတ်ရင် အသေဆိုးနဲ့ သေလိမ့်မယ်လို့ပေါ့။ ။
ခန္ဒာကိုယ် ရင်းစားရသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ
မှတ်ချက်။ နှစ်ပုလင်းဆိုသည်မှာ ကျပ်နှစ်သောင်း။
မိန်းမတို့ အိနြေ္ဒ ရွှေပေးလို့မရတဲ့
အဘွားတို့၊ အမေတို့ခေတ်က ဆိုရိုးစကား
ကျမ ဒါတွေဂရုစိုက်နေရင် ကျမကိုမှီခိုနေတဲ့မိသားစု
ပန်းနာသည် အဖေ့အတွက် ဆေးဝယ်ရဦးမယ်
နာတာရှည် အမေက အိမ်မှာမျှော်နေလိမ့်မယ်
ကျောင်းထွက်ပြီး ကြုံရာအလုပ် လုပ်နေကြတယ်။
မိန်းမမာယာ အပြည့်နဲ့ ဈေးခေါ်လိုက်မယ်
“ အစ်ကို.. သွားမလား ” ။ ။
န၀တ၊ နအဖ ကိုလူဆိုး
“ အာအိုင်တီ” ကိုဖျက်
မြန်မာပြည်မှာ “အာအိုင်တီ” နာမည်လုံးဝမရှိစေရ
“ အာအိုင်တီ ” ကိုဖျက်ရုံမက
နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ တက္ကသိုလ်ငယ်များ မိူလိုပေါက်
၀ိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ အတန်းများ
စေတနာနဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ပြင်တာဟုတ်ဖူး
ဆရာမကို လုံချည်ကန်တော့လိုက်ရင် ပြီးတာပဲ
အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမူဟာ “ပညာရေး” တဲ့
ကမ္ဘာမှာ “ပညာရေး” ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြပြီ။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့ “ မိမိအိတ်ဖောင်းရေး ” စီးပွားရေးပေါ်လစီကြောင့်
ကျောင်းသူတွေ “ဖာ” ဖြစ်ကုန်ပြီ၊
ဧပြီ ၂၀၀၆ မှာ ၀န်ထမ်းလစာတွေတိုးပေးပြီးကတည်းက
ကုန်ဈေးနူန်းတွေ (၆၀ ရာခိုင်နူန်း) ထိုးတက်သွားသတဲ့
လက်တွေ့မှာတော့ “ဈေးမသွားချင်တော့ဘူး” လို့
အမေက ခဏခဏ ညဉ်းတယ်။
“ ဈေးသွားခါနီး အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ဟာ
စစ်ထွက်ခါနီး သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လိုပဲ ” တဲ့။
အခုတော့ ကုန်ဈေးနူန်းက ဖျပ်ပစ်ပေါ့
မနက်စာ နေ့လည်စာ ညစာ တစ်နပ်စာပဲ ပေါင်းစားရတဲ့အဖြစ်
လူလည်း “ဒုက္ခစရိယ” ကျင့်သလို
ငါငယ်ငယ်က အဖွားပြောပြတဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေကိုပဲ
ခေတ်တွေများ ကွာလိုက်တာ ပြောပါတယ် အဖွားရယ်
ငါ့အောက်က ညီလေးနဲ့ ညီမလေး
ငါးယောက်ရှိတဲ့ ငါတို့မိသားစု ၀မ်းဝအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့။
တချို့ဆို မိဘတွေကကို သိလျှက်နဲ့မျက်နှာလွှဲ
လောကမှာ ဘာမ မရှိတော့ဖူးလား။
ဆိုတော့ မြန်မာပြည်ဘာ ဖြစ်နေပြီလဲ
နေရာတိုင်း၊ မြို့တိုင်း၊ မြန်မာပြည်တလွှားမှာ
ပြည်မှာကြည့်မလား၊ ရန်ကုန်၊ မကွေး၊ ဟင်္သာတ၊ မုံရွာ၊
မအူပင်၊ မော်လမြိုင်၊ ဘားအံ၊ ပခုက္ကူ၊ အောင်လံ၊ ပုသိမ်
ဘာတဲ့ “ စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသော
စက်မူနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆီသို့ ” တဲ့
ခွေးမသားတွေ အသေဆိုးနဲ့ သေလိုက်စေချင်တယ်။ ။
အို ကြံ့ဖွတ် ကိုလူဆိုး
၂၀၀၃ မေလ ဒီပဲယင်းမှာလည်း
သခင်ခိုင်းစေသမျှ ပြည်သူကို အကြမ်းဖက်ဗိုလ်ကျ
မင်းတို့ အပြုအမူတွေပြင်လိုက်ဖို့။ ။
မင်းကော ငါ့ကို လွမ်းနေမှာလား။
“နေရဉ္စရာ” ရယ် သိပ်လွမ်းမိပါတယ်။
စပယ်နဲ့ ဇီဇ၀ါပန်းနံ့လေးတွေ ရှူရှိုက်မိတဲ့အချိန်
ငါကတော့ မင်းကို အရမ်းသတိရနေမိပါတယ်
ငါ တို့ စတွေ့ခဲ့ကြတယ်။
စကားပြောတိုင်း “ ကျနော်.. ကျနော် ” နဲ့ပြောတတ်တဲ့
“ စကားဝါဆောင်ရှေ့က ခုံတန်းကလေးတွေမှာ
“ ကျနော်.. ကျနော် ” နဲ့ ပြောတဲ့မင်းကို
ချစ်သက်တမ်း (၂) နှစ်အတွင်းမှာ
တသက်မခွဲကြေး ငါတို့တွေ သစ္စာထားခဲ့ကြတယ်။
“ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဘ၀က မပြည့်စုံဖူး ” တဲ့
ငါတို့ ချစ်သူ နှစ်ယောက်မှာတော့
“ အချစ် ” ပဲကုံလုံ ကြွယ်ဝတယ်။
“ ကျနော်တို့ ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက်
ကျနော်ကြိုးစားမယ် ” လို့ပြောပြီး
“ ငွေကြေး ” မပြည့်စုံရင်နေပါစေ
တို့ဘ၀ကို အချစ်တွေနဲ့ပဲ တည်ဆောက်ရအောင်ပါ။
တို့ မင်းကို သိပ်လွမ်းနေပြီ ချစ်သူကောင်လေးရယ်။ ။
ခေတ် ပညာတတ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတဲ့
အခုဆိုရင် ငါဟာ ဖိုင်နယ်မှာပေါ့
ဒါမှမဟုတ် ပညာရေးစနစ်ကပဲ ညံ့သလား
“ ကျောင်းတွင်းမှာ အဆောင်မထားရ ” တဲ့
“ ညနေ ၆နာရီ ကျော်ရင်ကျောင်းထဲမ၀င်ရ ” တဲ့
ကဗျာများရေးသားသူမှာ ငြိမ်းချမ်းအောင် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Nyein Chan Aung at 12:49:00 PM3comments
Labels: My poem, မုတ်သုန်အတွေး ကဗျာစာအုပ်
News collection - Laura Bush meets with UN envoy on Myanmar
- Laura Bush meets with UN envoy on Myanmar, Link here
- Bush likely to cancel US ASEAN summit over Myanmar: diplomats, Link here
- သံဃာ့ဦးသျှောင် အိန္ဒိယဌာနခွဲက နအဖသံရုံးအလှူကို လုံးဝလက်မခံ ဤနေရာမှာ
- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ဇနီး တက္ကသိုလ်တွဲဖက်ပါမောက္ခ နယ်ပြောင်းခံရ ဤနေရာမှာ
- ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ရာဇ၀တ်သားများထဲ ထည့်ထားလိုက်ပြီ၊ နအဖ အပြောနှင့်အလုပ်ညီရန် ၈၈ ကျောင်းသားများ တောင်းဆို ဤနေရာမှာ
- ၁၈-ရက်မြောက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေသူကို မနက်ဖြန်ရုံးထုတ်မည် ဤနေရာမှာ
- ဖခင်တလပြည့်ဆွမ်းကျွေးကို မဖြူဖြူသင်း လာခွင့်မကြုံ ဤနေရာမှာ
- ငွေကြာယံဆရာတော် ကျောင်းတိုက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိ သတင်းသုံးနေ ဤနေရာမှာ
- အခမဲ့ အမည်ခံ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဆေးခန်း တိုကင်ဖိုးကောက်နေ ဤနေရာမှာ
- ဗီဇာတစ်ခုတည်းနဲ့ နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားနိုင်ရေးမူ ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားသဘောတူ ဤနေရာမှာ
- ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို အင်းစိန် သီးသန့်ထောင်မှ ထောင်မကြီးသို့ပြောင်းပြီး သာမန်ရာဇ၀တ် သားများနှင့်တွဲထား Link here
- ငွေကြာယံစာသင်တိုက် ဆရာတော်ကြီး အပါအ၀င် သံဃာတော်အချို့ ပြန်လည်လွတ်မြောက် Link here
- ရှမ်းအမျိုးသမီးတဦးကို မြန်မာစစ်တပ်က အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့် Link here
- ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှု ဆက်လက်ပြုလုပ် Link here
- နအဖ က ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အိုင်တီမြို့တော် ဖွင့်လှစ် Link here
- ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို အင်းစိန်သီးသန့်ထောင်မှ ထောင်မကြီးသို့ပြောင်းပြီး သာမန် ရာဇ၀တ်သားများနှင့်တွဲထား Link here
- မြန်မာစစ်အစိုးရက သံဃာတော် (၉၆) ပါးကို ပြန်လွှတ်ပေး Link here
- ထိုင်းပြည်သူ့စစ်များကို ကရင်နီကျောင်းသားများ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ Link here
- အီရန်အနုမြူ ဓါတ်ပေါင်းဖိုအတွက် လိုအပ်တဲ့ လောင်စာတွေ ရုရှား တင်ပို့ Link here
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ လူကိုကူးစက်ခဲ့သော်လည်း ရောဂါမပြန့်ပွားရန် ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟု WHO ပြော Link here
- အီရန်နိုင်ငံကို ရုရှားက နျူကလီးယား လောင်စာပေးပို့မှု သမ္မတဘုရှ် သတိနဲ့တုန့်ပြန် Link here
- မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ လူကိုကူးစက်မှုစတင်ဖြစ်ပွား Link here
- Burma quietly releases 96 monks, Link here
- Myanmar refugees face wretched existence in Malaysia, Link here
- WHO urges vigilance as bird flu spreads, Link here
- Turkey says US approved Iraq strikes, Link here
- တောင်ဥက္ကလာပ ဇနိလရာမကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ထောင် (၂) နှစ်ချမှတ်ခံရ ဤနေရာမှာ
- တောင်ကုတ်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တစ်ဦးကို အာဏာပိုင်များ ဆေးတိုက်စစ်ဆေး ဤနေရာမှာ
- ထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်က ကရင်နီဒုက္ခသည် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို ပစ်သတ် Link here
- မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကို ပိတ်ပင်နေသည့် ပေါ် မြို့ခံလူထု မကျေနပ်မူတိုးပွား Link here
- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးမီးရှူးတိုင် နယူးဇီလန်ရောက်ရှိ Link here
- လူ့အခွင့်အရေး ကျောက်မျက်ရတနာ နှင့် မြန်မာ့အခြေအနေ (2) Link here
- နိုင်ငံတကာ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများသွေးလှူဒါန်း Link here
- ပါကစ္စတန် အတိုက်ခံခေါင်းဆောင် ဘူတိုက လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ လိုလား Link here
- အီရတ်နိုင်ငံ ဘာစရာ ခရိုင်ရဲ့ လုံခြုံရေးလုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်တွေကို ဗြိတိန်က အီရတ် တပ်ဖွဲ့တွေကို လွဲပြောင်းပေး Link here
- ဘာလီ ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေး သဘောတူညီချက်အတွက် စေ့စပ်ညှိ့နိုင်းဘို့ သဘောတူကြပြီ Link here
- နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို အရေးယူဒဏ်ခတ်ရန် ကနေဒါအစိုးရ ဆုံးဖြတ် Link here
- မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးရေး အလားအလာများ လေ့လာရန်သွားရောက်မည့် ဂျာမန်အမတ်နှစ်ဦးကို အထူးသံတမန်ဗီဇာပေးရန် မြန်မာအစိုးရ ငြင်းပယ် Link here
- အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာချက် ပါကစ္စတန်သမတ ရုတ်သိမ်း Link here
- WHO praises swift bird flu reporting, Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 5:08:00 PM0comments
- လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းဖြန့်ဝေသူ နှစ်ဦးအားဖမ်းဆီး ရုံးတင် တရားစွဲ Link here
- အနက်ရောင်ဝတ်တက်သည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သတိပေးခံရ Link here
- မြန်မာရဟန်းတော်များကို ဆန်ဖရန်စစ္စကို တက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးတောင်ဘွဲ့ပေးအပ် Link here
- ပရိယတ္တိသာသနာ့ တက္ကသလိုလ်မှ အမူဆောင် သံဃာနှစ်ပါးကျောင်းမှ ထုတ်ပယ်ခံရ Link here
- ပါဆယ်ပေးခွင့် လူချင်းတွေ့ခွင့်မရသေးသည့် ပုက္ကူမြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလိူင်အေးအတွက် မိသားစု စိုးရိမ်ပူပန် Link here
- လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မူများကို မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယအကြိမ်သွားရောက် စစ်ဆေးရန် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ပီညဲရိုးကို တာဝန်ပေးအပ် Link here
- မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် ဖိနှိပ်ချုပ်ကိုင်မူများကို လျှော့ချမပေးပါက ပိတ်ဆို့အရေးယူမူများကို ထပ်တိုးမြင့်ရန် အဆင်သင့် ရှိသည်ဟု အီးယူပြောဆို Link here
- ကျိုင်းတုံတွင်ဖြစ်ပွားသည့် ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးသည် တရုတ်နယ်စပ်ကကူးစက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ပြောဆို Link here
- ဗုဒ္ဓသာသနာမပျက်သုဉ်းရေး ဆောင်ရွက်ရန် ရွှေဝါရောင် သောတုဇန ဘိက္ခူအဖွဲ့ကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ဖွဲ့စည်း Link here
- EU to help Myanmar refugees in Bangladesh, Link here
- ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ခြေကျိုး Link here
- ထိုင်းကချင်များ မနောပွဲ ကျင်းပ Link here
- ပထမဆုံးသော ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ လူတွင် ကူးစက်မှု စစ်အစိုးရ အတည်ပြု Link here
- မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ အသေးစိတ် ထပ်မံစုံစမ်းရန် မစ္စတာပင်ညဲရိုးကို ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီက တာဝန်ပေး Link here
- မြန်မာ့ကျောက်မြတ်ရတနာများကို နိုင်ငံတကာ သပိတ်မှောက်နေသည့်ကြားမှ ကျောက်မြတ်ရောင်းချပွဲ လုပ်ရန် စစ်အစိုးရ ကြေညာ Link here
- မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါ ပထမဆုံး လူတွင် ဖြစ်ပွားကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အတည်ပြု Link here
- Myanmar reports 1st human bird flu case, Link here
- Myanmar reports first human bird flu case, Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 8:43:00 PM0comments
- ဆယ်မိုင်ကုန်းတရားစခန်း ဆရာတော် ဇောတိကရဲ့ လူရည်ချွန်တရားတော် Link here
- စေ့စပ်ဆွေးနွေးရန် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် တိုက်တွန်း Link here
- ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးတောင်းဆိုမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ကိုထင်ကျော်ကို ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူမည်ဟု မျှော်လင့်ရ Link here
- မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး အင်ဒိုနီးရှားကူညီမည်ဟုဆို၊ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များ အကောင်းဖက်မှ ရှုမြင်ရန်ခက် Link here
- Myanmar deaths higher than U.N. estimate: activists, Link here
- Myanmar seizes 40 kilos of opium in November, Link here
- ဆီးဂိမ်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ထိုင်း ဗိုလ်စွဲ Link here
- ကုန်ဈေးနှုန်းချပေးရန် တောင်းဆိုမှုသည် ဆူပူရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းမဟုတ်ဟု အမ်ဒီစီပြောကြား Link here
- မခြောက်သော သွေးနှင့် မျက်ရည် Link here
- မြန်မာပြည်မှ ပေးစာ မသင်္ကာဖွယ် ဆိတ်ငြိမ်တိတ်ဆိတ်နေမှု (ဆောင်းပါး) Link here
- မြန်မာရဟန်းတော်များ၏ ဂျပန်ခရီး Link here
- သံဃာသပိတ် ထောက်ခံသော စာပေအနုပညာရှင်များ လုပ်ငန်းပိတ်ပင်ခံရ Link here
- တုတ်ရိုက် သင်တန်းတွေ ပေးနေပြီ Link here
- အကောင်းဆုံးဂျင်နရေတာ နေပြည်တော်ပို့လိုက်ရသဖြင့် ရန်ကုန်တွင်မီးပိုပျက် Link here
- ယုဇန ဆီအုန်းစက်ရုံ၏ အနံ့ဆိုးများကြောင့် အနီးနားနေ ပြည်သူများ ဒုက္ခရောက် Link here
- အခပေးတီဗွီလိုင်း မြ၀တီလုပ်ခွင့်ရ Link here
- နအဖစစ်တပ်က ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်မှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေဟု ကေအန်ယူပြော Link here
- ရွေးကောက်ပွဲ အေးဆေးစွာကျင်းပနိုင်ရန် ထိုင်းတွင် လုံခြုံရေးပိုမိုတင်းကျပ်မည် Link here
- မြန်မာအစိုးရကို မနှောင့်ယှက်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြော Link here
- မုန်တိုင်းသင့်ခဲ့သည့် ဆန်တာဘန်းလမုတောကြီး ပြုစုပျိုးထောင်ရန် နှစ် (၃၀) ကြာမည်ခန့်မှန်း Link here
- မြန်မာဒုက္ခသည်များကို UNHCR က HIV/AIDS သင်တန်းပေး Link here
- ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာများ နိုင်ငံရင်းသို့ ငွေပို့ရာတွင် အခက်ကြုံနေ Link here
- နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ထောင်ဝင်စာ ပိတ်ပင်ခံရ Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 8:50:00 PM0comments
- မကွေးအတွင်းရေးမူး ဦးမြင့်ဦးအပါအ၀င် (၄) ဦးကိုရုံးထုတ် Link here
- ဆန်စပါးဈေးရုတ်တရက်တက် လယ်သမားအကျိုးမရှိ Link here
- Myanmar charges activist with "public mischief", Link here
- အမေရိကန် ပန်းပုဆရာက မင်းကိုနိုင် ရုပ်တု ထုလုပ်ဂုဏ်ပြု Link here
- နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အင်းစိန်ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ Link here
- ယခုနှစ်ကုန် လူထုအုံကြွမူစတင်မည် Link here
- စစ်အစိုးရကို MDC သတိပေးတောင်းဆို Link here
- နအဖ က ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ စိတ်ရောဂါ ကောလာဟလကို ဖယ်ရှား Link here
- အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူ ကိုထင်ကျော် ပျောက်ဆုံးနေ Link here
- ဆီးဂိမ်းမှာ မြန်မာ ရွှေရရှိမှုနည်း Link here
- ဖိအားပေး ဈေးချရောင်းခိုင်း၍ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအခက်တွေ့ Link here
- စက်တင်ဘာလအရေးအခင်း၌ပျောက်ဆုံးသူ သေသလားရှင်သလား မသိရ Link here
- စစ်အစိုးရ ကတိတည်ပါဟု တောင်ကုတ်အဖွဲ့ချုပ်တောင်းဆို Link here
- မြန်မာလူ့အခွင့်အရေးပြသနာအသေအချာဆွေးနွေးချိန်တန်ပြီဟု ပီညဲရိုးပြော Link here
- မဂ္ဂင်ကျောင်းပိတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း ရဲချုပ်ပြောကြားချက်မမှန်၊ သံဃာတော်များစွာ အင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်နေ Link here
- အိမ်ရှင်မများအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ခင်မာချိုကို မနက်ဖြန်တရားရုံးထုတ်မည် Link here
- မြန်မာ့အရေးတရုတ်နှင့်ဆွေးနွေးရန် အီးယူကိုယ်စားလှယ်ပြင်ဆင်နေ Link here
- မြန်မာ့အရေး နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲ ထိုင်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အဆိုပြုမည် Link here
- လက်ရှိ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုက ပြည်သူတွေထက် စစ်ခေါင်းဆောင် တွေကို ချက်ချင်း ထိခိုက်နေ Link here
- ဥရောပသမဂ္ဂ အထူးသံကိုယ်စားလှယ် မြန်မာ့အရေးအတွက် တရုတ်အားတိုက်တွန်းဖို့ ခရီးထွက် Link here
- ဘာလီ ရာသီဥတုညီလာခံ သောင်မတင်ရေမကျ အခြေအနေဆိုက်ရောက်နေ Link here
- ဘာလီ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ညီလာခံ Link here
- ပင်ညဲရိုးရဲ့ အစီရင်ခံစာအပေါ် အေအေပီပီ အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်နဲ့ မေးမြန်းခန်း Link here
- အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတင်သွင်းမှု ပိတ်ဆို့ရေးဥပဒေအပေါ် အမြင်ကွဲပြားမှုတွေ ရှိနေ Link here
- ပင်ညဲရိုး အစီရင်ခံစာတင်သွင်းတာကို ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် နားထောင်ခဲ့သူ ဦးမင်းလွင်ဦးနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် Link here
- Thailand storm to six golds in 'comic show', Link here
- Burmese voices louder in 2007, Link here
- Bush threatens Burma with more sanctions, Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 10:46:00 PM0comments
- ပင်ညဲရိုးရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာ ပြည့်စုံမှုရှိ၊ အသေးစိတ်အချက် အလက်တွေပါ Link here
- တောင်အာဖရိက Cape Town တက္ကသိုလ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ ချီးမြှင့် Link here
- မစ္စတာ ပင်ညဲရိုးရဲ့ အစီရင်ခံစာအပေါ် တိုက်အခံအင်အားစုတွေရဲ့ တုန့်ပြန် ပြောဆိုချက်များ Link here
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရန် အမေရိကန်သမ္မတကတော် တောင်းဆို Link here
- အကြမ်းဖက်သမားတွေကို စစ်တဲ့ ဗွီဒီယိုခွေဖျက်ဆီးမှု စီအိုင်အေအကြီးအကဲ စစ်ဆေးခံနေရ Link here
- အစာငတ်ခံ (၁၂) ရက်မြောက်မှာ ကိုထင်ကျော်ကို တရားစွဲလိုက်ပြီ Link here
- မစ္စတာပင်ညဲရိုး ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတင်သွင်း Link here
- အယ်ဂျီးရီးယားတွင်ဗုံးပေါက်ကွဲကြောင့် ကုလအဆောက်အဦးနှင့်ဝန်ထမ်း များထိခိုက်သေဆုံး Link here
- မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ပိုမိုပြင်းထန်စွာ အရေးယူဒဏ်ခတ်မယ့် ဥပဒေမူကြမ်း အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် အတည်ပြု Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 6:37:00 PM0comments
- Bush warns Myanmar of world sanctions, Link here
- Bush condemns Myanmar crackdown after U.N. report, Link here
- Bush threatens Myanmar with more sanctions, Link here
- House passes bill hitting Myanmar gems, Chevron, Link here
- Myanmar rejects U.N. human rights report, Link here
- ကျောင်းသား အယောင်ဆောင် လုံခြုံရေးများ တက္ကသိုလ်များ၌ တိုးမြှင့်ချထား Link here
- မြန်မာ့သနပ်ခါး ခေတ်စားလာပြီ Link here
- မြန်မာ့အားကစား အရှေ့တောင်အာရှတွင် ပိုမိုကျဆင်းလာ Link Here
- လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံအဆင့်ဖော်ရန် လိုအပ်ဟု အကြမ်းမဖက်အဖွဲ့က ပြော Link here
- ကုလသမဂ္ဂနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နအဖ ကို MDC အဖွဲ့ဝင်များတောင်းဆို Link here
- တောင်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ပထမဆုံးအကြိမ် ကုန်တင်ရထားထွက်ခွာ Link here
- ဒီမိုကရေစီရေး မလုပ်နိုင်ရင် လမ်းဖယ်ပေးဘို့ စစ်အစိုးရကို သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှတိုက်တွန်း Link here
- ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဥာဉ်ကိုလေးစားရန် မြန်မာစစ်အစိုးရကို အတွင်းရေးမှူးချုပ် တိုက်တွန်း Link here
- မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက အရေးယူရန် မစ်ခ်ျမက်ကောနဲလ် တိုက်တွန်း Link here
- မြန်မာပြည်နှင့်ပတ်သက်၍ မစ္စတာပင်ညဲရိုး လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းတော့မည် Link here
- အာရှဒေသတွင်း သောက်သုံးရေပြဿနာမကြုံစေရန် ရေအရင်းအမြစ်ကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲရန်လိုဟုပြော Link here
- သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရကို ပုဒ်မ ၅(ည) ဖြင့် တရားစွဲဆို Link here
- အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတာ ၁၂ ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကိုထင်ကျော်ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေး Link here
- ရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံမှာ ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့လျှော့ချရေး ဆွေးနွေးရန်ရည်ရွယ် Link here
- မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ဆုတ်ယုတ်နေမှုအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း သမ္မတကတော်လော်ရာဘွတ်ရှ် လူ့အခွင့်အရေးနေ့တွင် ပြောကြား Link here
- မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်များ ချိုးဖောက်ခံနေရဆဲ Link here
- မြန်မာနိုင်ငံသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အဆိုးဝါးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိန် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန် Link here
- နအဖစစ်အစိုးရမရှိလျှင် တိုင်းပြည်ပိုမိုစည်းလုံး ညီညွတ်နိုင်ဟု မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် အတိုက်အခံများ ဆွေးနွေးတင်ပြ Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 8:22:00 PM0comments
Posted by Nyein Chan Aung at 10:54:00 AM0comments
News collection - UN head: Patience running out on Myanmar
- မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေး ကမ္ဘာက စိတ်မရှည်နိုင်တော့ဟု မစ္စတာဘန်ကီမွန်းပြောဆိုချက် အဲန်အယ်လ်ဒီကြိုဆို Link here
- မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စိတ်ရှည်သီးခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ ကုန်ဆုံးနေပြီဟု ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမူးချုပ်သတိပေး Link here
- ဆန္ဒပြပွဲ၌ရိုက်သတ်ခံရသူ၏မိဘများကို နအဖ အာဏာပိုင်များ တရားစွဲ Link here
- ပြန်ပေးဆွဲခံထားရသော မြန်မာသင်္ဘောသားများပါဝင်သည့် ဂျပန်သင်္ဘောကို အမေရိကန်ရေတပ် ကယ်တင်ရန်ကြိုးစား Link here
- UN head: Patience running out on Myanmar, Link here
- U.N.'s Ban says patience running out with Myanmar, Link here
- Myanmar stepping up attacks on insurgents: rebel group, Link here
- လူ့အခွင့်အရေး ဆိတ်သုဉ်းနေဆဲ မြန်မာပြည် Link here
- သတ္တမအကြိမ်မြောက် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပ Link here- နအဖ တပ်များ ကရင်နယ်မြေအတွင်း ထိုးစစ်ဆင်မှု ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာ Link here
- နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျ ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးရွား Link here
- လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ပြည်သူအားလုံး ကြိုးပမ်းရန် HRDP တိုက်တွန်း Link here
- ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နာဝပ်ရှရစ်ဖ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံတ၀န်း မဲဆွယ်မှုစတင် Link here- ဘန်ကောက်ရောက် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အား မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများ ဆန္ဒပြတောင်းဆို Link here
- မြန်မာအလုပ်သမားများ အခက်အခဲကြားမှ အဆိုတော် R ဇာနည်ကို လာရောက်အားပေး Link here
- စစ်ဆင်ရေးတိုးမြှင့်မှုကို KNU ရှုတ်ချ Link here
- ဦးတေဇကို ဘောလုံးပွဲဒိုင်များက မကျေနပ် Link here
- နအဖ တပ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေ တိုင်းရင်းသားများ ထွက်ပြေးနေရချိန်တွင် နအဖဗိုလ်ချုပ်များ ဂေါက်သီးရိုက်မပျက် Link here
- မြန်မာစစ်အစိုးရကို သီးခံမူကုန်ခန်းလာပြီဟု ကုလအကြီးအကဲပြော Link here
- အာဇာနည်ဆိုသည့် မဲဆောက်တေးဂီတပွဲ မြန်မာတစ်သောင်းကျော်အားပေး Link here
- အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရနဲ့ နော်ဝေအစေိုးရတို့ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး Link here
- အီးယူ အာဖရိကဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍသစ်ရောက်ပြီလို့ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များကြေညာ Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 6:49:00 PM0comments
- မလိူင်မြို့နယ်မှ တောင်သူများကို အဓ္ဓမစပါးပြောင်းစိုက်ခိုင်း စပါးမစိုက်ပါက ထောင်ချမည်ဟု မယက အမိန့်ထုတ် Link here
- နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ(2) Link here
- နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ(1) Link here
- လိပ်ခေါင်းရောဂါခံစားနေရသည့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကို ထိရောက်သည့် ကုသမူမပေး Link here
- နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့အကြိုဆန္ဒပြပွဲများ နိုင်ငံတကာတွင် ပြုလုပ် Link here
- သြစတြေးလျှအစိုးရသစ်အနေနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ထိရောက်အောင်မြင်သည့် မူဝါဒအသစ် ချမှတ်ဆက်ဆံရန် ဥပဒေပညာရှင် နှစ်ဦးဆောင်းဆို Link here
- စစ်မှန်သည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမလုပ်ပါက စစ်ရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးရန် အကူအညီတောင်းခံမည်ဟု လူထုလူပ်ရှားမူကော်မတီကပြော Link here
- လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများ ကွန်ယက်က (၅၉) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပမည် Link here
- ရန်ကုန်နှင့်ရှမ်းပြည်အနှံ့တွင် ရှမ်းနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲများကျင်းပ Link here
- မြန်မာစစ်အစိုးရကို ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမူများလုပ်ရန် တွမ်လန်းတိုစ့်ပြော Link here
- လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုအများစုကို အာဏာပိုင်တွေက ကျုးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း HRDP ပြောဆို Link here
- နှစ်စဉ် တရုတ်ပြည်မှ မြန်မာပြည်တွင်းသုိ့ ကားပေါင်းထောင်ချီ တင်သွင်းနေ Link here
- အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် အီရန်ကြိုးစားနေဆဲ Link here
- အီရန်ဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေဆဲဟု အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက သတ်မှတ် Link here
- ဥရောပဘက်က လွတ်လပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အဆိုပြုချက် အာဖရိက လက်မခံ Link here
- အမေရိကန် ဒီမိုကရက်များ စီအိုင်အေရဲ့ ဗွီဒီယိုခွေဖျက်ဆီးမှုကိစ္စအတွက် စစ်ဆေးမှုလိုလား Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 9:09:00 PM0comments
- စက်မူ (၁) ၀န်ကြီး၏ အလူအား စိတ္တဗလဂူကျောင်းတိုက်မှ သံဃာတော်များ လက်မခံပဲ ငြင်းပယ်၊ ဓမ္မစရိယနှင့် ပထမပြန်စာမေးပွဲများကို သပိတ်မှောက်မည် Link here
- ဖမ်းဆီးထားသည့် ကိုသန်းဇော်မြင့်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ထားကြောင်းမပြောသဖြင့် မိသားစုဝင်များစိုးရိမ်နေ Link here
- ပြန်လွတ်မလာသေးသူများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မူများတိုးပွား Link here
- မြန်မာ့အရေးကမ္ဘာက ပိုမိုသိရှိရန် သိရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များ လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်ဝေသည့် လူပ်ရှားမူစတင် Link here
- နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိတက္ကသိုလ်မှ သံဃာ (၈) ပါးကျောင်းထုတ်ခံရ Link here
- စက်တင်ဘာလူပ်ရှားမူတွင် အနည်းဆုံး (၃၁) ဦးသေဆုံးခဲ့ဟု ကုလလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြ Link here
- နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အတွင်း အမေရိကန်လွှတ်တော်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အရေးယူမှုဥပဒေကြမ်းတရပ် အတည်ပြုဖွယ်ရှိ Link here
-စက်တင်ဘာလလှုပ်ရှားမှုတွင်း သံဃာများကိုထောက်ပံ့မှုဖြင့် အနုပညာရှင်အချို့ လုပ်ငန်းများ ပိတ်ပင်ခံရ Link here
- စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုကို စစ်အစိုးရမှ အလွန်အကျွံ အင်အားသုံးကိုင်တွယ်မှုကြောင့် လူအနည်းဆုံး ၃၀ သေဆုံးခဲ့ Link here
- ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို စည်းရုံးရေးခရီးထွက် Here link
- ၂၄ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြောက်ကိုရီးယားသံအမတ် ခန့်အပ်လွှာ ပေးအပ် Link here
- စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုများ ဗီယက်နမ် ပိုမိုရရှိ Here link
- စစ်အစိုးရကြေညာသည့် ၁၀ ဦးထက်မက သေဆုံးသူများစွာရှိကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန် Link here
- Burma death toll at least 31, Pinheiro says, Link here
- North Korean envoy takes up Myanmar post, Link here
Posted by Nyein Chan Aung at 8:14:00 PM0comments
ဦးဏှောက်တွေကို ထုတ်လဲပစ်လိုက်လို့ ရရင်ကောင်းမယ်
ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာမှာ ဖိုင်စီသလို
မျိုးချစ်စိတ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ သူရဲကောင်းမပေါ်နိုင်ဘူး
အခုတော့ ငါ့ဦးဏှောက်တွေ ဆွံ့အနေတယ်
လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ မြုံနေကြတယ်
“သတ္တိ” လို့ လက်ဖျံမှာဆေးမင်ကြောင်ရေးထိုးပြီး
သူကြီးကို ငပေါပါလို့ ထင်နေသူတွေလည်းရှိတယ်
အာရှတိုက်က ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ
အာဖရိကတိုက်က ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ထက်သာတယ်
သမတ္တဖြစ်ခွင့်ရဖို့ အိပ်မက် မက်ခွင့်ရှိတယ်
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘယ်သူက ပိုအလုပ်ဖြစ်သလဲ
ဘယ်သူက တိုင်းပြည်ကို ပိုချစ်သလဲ
မနက်ဖြန်မနက်လင်းလာတဲ့အခါ စစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ။
၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by Nyein Chan Aung at 10:47:00 AM3comments
ငါ့မှာ အတတ်ပညာကလည်း ခပ်နဲနဲ
ဒီလိုနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ငါစဉ်းစား
“အချစ်” အကြောင်း မကြာခဏရေးဖို့ သင့်တော်ပါ့မလား ငါစဉ်းစား
အနုပညာဟာ မင်းနဲ့ ငါ့ကြားက အဖျော်ဖြေခံပစ္စည်းတစ်ခုလား
ငါ့စိတ်တွေအကြောလျှော့ဖို့ အနုပညာကို ဓါးစာခံ လုပ်ခိုင်းသင့်သလား
ငါ့ရင်ဘတ်ထဲက ခံစားချက်တွေကို မင်းသိအောင်ပြောပြလိုက်ဖို့
အိပ်ရေးမ၀သေးပဲနဲ့ မြင်းစီးလို့ ဖြစ်ပါ့မလား ငါစဉ်းစား
ညစာမရှိသေးပဲနဲ့ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ကို ချစ်ရေးဆိုလိုက်ဖို့ သင့်ပါ့မလား
အနုပညာဟာ ငါ့အတ္တတွေရဲ့ ကျေးကျွန်လား
အနုပညာဟာ ငါ့မာနတွေကို ခင်းကျင်းပြသဖို့လား
အနုပညာဟာ ငါ့အကြောတွေဖြေလျှော့တဲ့ ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုလား
ဒါမှမဟုတ် ငါ့ရူးသွပ်မှုတွေရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလား
ကဗျာတစ်ပုဒ်ချရေးလိုက်ဖို့ ငါ လက်တွန့်နေမိတယ်။ ။
Posted by Nyein Chan Aung at 10:43:00 AM2comments
News collection - UN says 31 killed in Myanmar crackdown
- UN says 31 killed in Myanmar crackdown, Here the link
- U.N. report raises death toll in Myanmar crackdown, Here the link
- At least 31 killed in Myanmar unrest: UN expert, Here the link
- At least 20 killed in Myanmar crackdown: Human Rights Watch, Here the link
- Myanmar woes raise fears of new migration to Thailand, Here the link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်မှ အရှင်ဃောသိတက ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မရပ်သေးဟု မိန့်ကြား Here the link
- မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်မည့် တရုတ်စစ်ကားများ ရောက်ရှိ Here the link
- ငါးမင်းဆွေစာအုပ် တရားမ၀င်ထွက်နေ Here the link
- အနေကြာချင်သည့် စစ်အစိုးရ နေကြာ အဓမ္မစိုက်ခိုင်း Here the link
- မြေမြုပ်မိုင်းများ ကရင်လူထုကို ဒုက္ခပေးနေ Here the link
- စစ်တောင်းမြစ် အနောက်ဘက်က တမံကြီးကို ကြိုတင်အသေိပေးခြင်းမရှိပဲ ဖောက်ချခဲ့သဖြင့် မြေနုကျွန်းစိုက်ခင်းများ ရာနှင့်ချီပျက်စီး Link here
- စစ်အစိုးရ ၀န်ခံသည်ထက် သေဆုံးသူများပြားဟု နယူးယောက်ခ်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ပြောကြား Here the link
- အာဆီယံပဋိညာဉ်အတည်ပြုရန် ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေး အဓိကကျဟု ဖိလစ်ပိုင်ပြော Here the link
- ခေတ်သစ်မောင်မစ္စကပြိုင်ပွဲ မယ်တော်ဆေးခန်းတွင် ကျင်းပ Here the link
- နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းဟု သတင်းများ ပေါ်ထွက် Here the link
- သတင်းမှန်များသာ ဖော်ပြသင့်ဟု ဘီအမ်အေက နအဖကို ပြောဆို Here the link
- ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဓါးပြမူကိုပိတ်၊ မယက ဥက္ကဌက သစ်ခိုးရောင်းမူမစစ်ရန်တားမြစ် Here the link
- ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လျှော့ချခံရ Here the link
- ချင်းပြည်နယ်တွင် လမ်းဖောက်ရာ၌ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းပြီးငွေကောက်ခံ Here the link
- စစ်အစိုးရအနေကြာရေး နေကြာစီမံချက်ကြောင့်တောင်သူများအခက်ကြုံ Here the link
- စက်တင်ဘာဆန္ဒပြသူများကို စစ်ကြောရေး၌နှိပ်စက် Here the link
- စက်တင်ဘာ ဆန္ဒပြပွဲနှိမ်နင်းစဉ် သေဆုံးသူအရေအတွက် စစ်အစိုးရ လိမ်လည် ပြောဆိုကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ စွပ်စွဲ Here the link
- အိပ်စ်အိုင်ဗွီလူနာများကို အဖွဲ့ချုပ်က ကူညီထောက်ပံ့ Here the link
- အာဆီယံပဋိညာဉ်လက်မှတ်ထိုးရာတွင် ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေးကို အဓိကထားစဉ်းစားမည်ဟု ဖိလစ်ပိုင်သမတ ပြော Here the link
- စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုအတွင်း ရာနဲ့ချီသေဆုံးကြောင်း ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ ဦးဃောသိတ မိန့်ကြား Here the link
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ကျင်းပဖို့တောင် အခက်ကြုံနေရ Here the link
- အမေရိကန်နှင့် ရုရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အီရန် နျူကလီးယားအရေး ဆွေးနွေးမည် Here the link
- မြန်မာကလေးစစ်သားအသုံးပြုကိစ္စ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် တင်ပြဆွေးနွေး Here the link
- သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုအတွက် မစိုရိမ်ဆရာတော်ကို ပါရဂူဘွဲ့ ဆက်ကပ် Here the link
- ကလေးစစ်သားအသုံးပြုသည့် နအဖကို လုံခြုံရေးကောင်စီမှ တရားဝင်ပိတ်ဆို့အရေးယူရန် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တောင်းဆို Here the link
- အင်းစိန်ထောင်မှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေသည့် ကိုထင်ကျော်အတွက်လေးစားဂုဏ်ယူကြောင်း သတ္တမတန်းကျောင်းသားဖြစ်သူ သားကပြောဆို Here the link
- ရွှေညောင်-သာစည်အစုန်ရထားတိမ်းမှောက်ပြီး (၃) ဦးပွဲချင်းပြီးသေ (၈၀) ကျော်ဒဏ်ရာရ Here the link
- တိုင်းပြည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်မူနှင့်ပတ်သက်ပြီး နအဖကို ကုလအရာရှိတဦးသတိပေး Here the link
- ကိုထင်ကျော်အစာငတ်ခံ (၇) ရက်မြောက်၌ အန်ဒီစီအဖွဲ့ဝင်များက နအဖကိုတောင်းဆို Here the link
- ရွှေတိဂုံစေတီ၌အစောင့်ရဲများတိုးပြီး လစာလည်းတိုးပေး Here the link
- လူထုအုံကြွမူကို စစ်အစိုးရထပ်မံရင်ဆိုင်ရမည်ဟု ကုလအရာရှိသတိပေး Here the link
- မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကို ပစ္စည်းလေးပါးလှူမည့်သူများ တားမြစ်ခံရ Here the link
- ရာသီဥတုဆိုင်ရာသိပ္ပံရှင်တို့ ကမ္ဘာလုံးပူနွေးလာမှုအပေါ် အမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း Here the link
- အီရတ်ရှိ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲ Here the link
- နျူကလီးယားကိစ္စ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ မြောက်ကိုရီးယားကို သမ္မတဘုရှ် တိုက်တွန်း Here the link
- သမ္မတ ဘုရှ် - ညူကလီးယား အစီအစဉ်အကြောင်း အီရန်ဘက်က ပိုရှင်းပြဖို့လို Here the link
- မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာ ပြဿနာကို ပြေလည်မှာ မဟုတ်ဟု တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ယုံကြည် Here the link
- ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ် မိခင်ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး ထောင်တွင်း ပြုလုပ်ခွင့်ရ Here the link
- မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာသစ် တစောင်ထုတ်ပြန် Here the link
- ကံဆောင်သပိတ် ပျက်ပြားစေရန် ပခုက္ကူတွင် နအဖ မှ ဆွမ်းဆန်များ ကပ်လှူ Here the link
- အိုးအိမ်နှင့်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ စစ်အစိုးရချိုးဖောက် Here the link
- မြန်မာကိုလက်နက်ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ရန် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ တောင်းဆို Here the link
- တရုတ်က မြန်မာကို စစ်ကား ၄ဝဝ ခန့် တင်ပို့မည် Here the link
- ၂၀၀၇ ခုအတွက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆု ဒီဗွီဘီရရှိ Here the link
- ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မြန်မာအရေး ထပ်မံတင်ပြဆွေးနွေးမည် Here the link
Posted by Nyein Chan Aung at 10:27:00 AM0comments
- ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရေး အတိုက်အခံများ ပါဝင်ခွင့်မပြု၍ မြန်မာစစ်အစိုးရအား အမေရိကန် အပြစ်တင် link
- ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တမျိုးသားလုံးပါဝင်ရန် ကုန်ဈေးနူန်းကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြအဖွဲ့ တိုက်တွန်း link
- ကိုထင်ကျော်ထောင်တွင်း၌အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေသည်မှာ (၆) ရက်ရှိပြီ link
- Burmese Opposition Marks National Day, Calls for Leader's Release, link
- လူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့၌အဖမ်းခံရသည့် ကဗျာဆရာပြန်လည်လွတ်မြောက် link
- နအဖ၏ဖမ်းဆီးပြန်လွှတ်စာရင်းများ မမှန်ဟု အေအေပီပီပြော link
- အပစ်ရပ် ၀အဖွဲ့နဲ့ နအဖ တို့ တိုက်ကြပြီ link
- မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကို ဆွမ်းမကပ်ရန် အာဏာပိုင်များတားမြစ် link
- အမေရိကန်အားကိုး ပုဆိန်ရိုးဆိုင်းဘုတ်များကို စီးပွားရေးကြော်ငြာများ၏ အပေါ်၌တင်ထား link
- Bush: Iran Must Explain More About Nuclear Program, link
- ကြော်ငြာဘုတ်များအပေါ်အမေရိကန်အားကိုး ပုဆိန်ရိုးများဟု ပြောင်းတင် link
- မြန်မာဒုက္ခသည်များအတွက် ရိက္ခာလျှော့ပြီ link
- ဂမ်ဘာရီ မြန်မာအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂတွင် အစီရင်ခံတင်ပြ link
- အမျိုးသားရေးဂုဏ်သိက္ခာ အမျိုးသားရေးဇာတိမာန် အနိမ့်ဆုံးကျဆင်းနေကြောင်း မြန်မာစာပေပညာရှင်ပြော link
- ပါဝင်သင့်သူများမပါဝင်ပဲရေးဆွဲမည့် စစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် အမေရိကန်အစိုးရ ရူတ်ချ link
- The accusation of Burma isamisunderstanding: Charles Petrie, link
- Expulsion of UN top diplomat is misunderstanding, link
- Burmese Military Leaders Release More Than Eight Thousand Prisoners, link
- တမျိုးသားလုံး ညီညွတ်ရန် အဖွဲ့ချုပ် တောင်းဆို link
- ဒေါ်စုကို ပံ့ပိုးပေးကြပါ။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေနိုင်ကြပါစေ (ဆောင်းပါး) link
- ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အမေရိကန်လွှတ်တော် ကြားနာပွဲ link
ကံ့ကော် သစ်ပုတ် နွေတမာ ပိတောက်
လောကမှာ အလှပဆုံး အဆောက်အဦးဟာ
လောကမှာ အပြစ်အကင်းဆုံး သက်ရှိတွေဟာ
လောကမှာ အချိုမြိန်ဆုံး အသံဟာ
ငါတို့ ကျောင်းတွေ ငါတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖွင့်ရမယ်
ငါတို့ ပညာရေးစနစ်ကို ငါတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရမယ်
ငါတို့ ဦးဏှောက်အလင်းကို ငါတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရမယ်
ငါတို့ နားမျက်စိတွေကို ငါတို့ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ရမယ်။ ။
Open School ကမ်ပိမ်းအတွက် ဤကဗျာကို ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။
Posted by Nyein Chan Aung at 5:14:00 PM2comments
- အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အဖွဲ့ချုပ်က ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန် link
- ကျောင်းသားပြည်သူပူးပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ပွဲ ၀င်ရန်ဗကသတိုက်တွန်း link
- နအဖရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပ တုန့်ပြန်ချက်များ link
- အာဏာပိုင်များက မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကို အတင်းအကြပ်နေရပ်ပြန်ပို့လိုက်ပြီ link
- အရှင်ဂမ္ဘီရ၏ခမည်းတော် မန္တလေးထောင်မှ ပြန်လွတ်လာ link
- ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ၏ အခမ်းအနားအစီအစဉ် link
- ဖမ်းဆီးထားသူများကိုလွှတ်ရန် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများတောင်းဆို link
- အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားများ၏ မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားလွှာ link
- တင့်ကားများ မြစ်ကြီးနားတွင် လှည့်ပတ် link
- မင်းသားကျော်သူ၏ သမီး မင်္ဂလာဆောင် ကြော်ငြာ ဆင်ဆာဖြတ်ခံရ link
- စစ်အစိုးရ၏ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ချိုးဖောက်ခံရမူများအကြောင်း အမေရိကန်လွှတ်တော်တွင် ကြားနာ link
- နေပြည်တော်၏ စွပ်စွဲချက်များမမှန်ဟု အတိုက်အခံများ ပယ်ချ link
- လွှတ်ပေးသူများထဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းငယ်သာ ပါဝင် link
- စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူလူထုကို အသိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း အတိုက်အခံများပြောဆို link
- စစ်အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ်ကို နေထိုင်ခွင့် ဆက်မပေးသည့်အပေါ် သုံးသပ်ချက် link
- မွန်ပြည်နယ်ရဲအရာရှိကြီးများ လာဘ်စားမှုဖြင့် စစ်ဆေးခံနေရ link
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲမှု ရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ဟု အတိုက်အခံများပြော link
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အမျိုးသားနေ့၌ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ ပန်ကြား link
- မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကနေဒါရောက်မျိုးချစ်မြန်မာတဦး အမေရိကန်ပြည်နယ်များတွင် ကားမောင်းလှုံ့ဆော် link
- နအဖစစ်အစိုးရက ဆန္ဒပြသူ (၈၀) ဦးကို ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ link
- “ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ သေတော့မည်” link
- စစ်အစိုးရ၏ ပွင့်လင်းရာသီထိုးစစ် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း စတင် link
- ကိုစိုးဝင်းညိုကွယ်လွန် link
- Myanmar monks prepared for another bloodbath: exiled monk, link
- Myanmar opposition: Nat'l prestige low, link
- 20 political prisoners among 8,500 freed in Myanmar, link
- More bloody confrontation unavoidable in Myanmar: exiled monk, link
Posted by Nyein Chan Aung at 7:35:00 PM0comments
News collection - Myanmar rejects calls to include Suu Kyi in reforms and restrict drafting constitution
Information minister Brig-Gen Kyaw Hsan: Pic bbc
- ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရာ၌ဒေါ်စုအခန်းလုံးဝပါမည်မဟုတ်ဟု နအဖပြော link
- တရုတ်ကုမ္ပဏီများရေကာတာ ဆောက်လုပ်နေမူကို ထိုင်းနိုင်ငံ၌ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ link
- Burma dismisses opposition constitution role, link
- ကိုကိုဝင်းလလည်ဆွပ်းသပ်ပွဲ အာဏာပိုင်တွေလုံခြုံရေးတင်းကြပ် link
- စစ်အစိုးရကဖမ်းထားသည့် ကိုဌေးကြွယ် မိခင် ဈာပနကို လာခွင့်မရ link
- မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကိုနေရပ်အဓမ္မပြန်ပို့ရန် အာဏာပိုင်များ အကြံအစည်မအောင်မြင်သေး link
- တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှေ့၌ရေကာတာဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြ link
- ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ပြုတ်မယ့်ကိန်းရောက်ပြီ (ဗေဒင်) link
- ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့မုခ်ရှိ နေအိမ်များ စစ်အစိုးရ သိမ်းဖွယ်ရှိ link
- အန်အယ်ဒီ ပြောခွင့်ရ ဦးမြင့်သိန်း ခွဲစိတ်ကုသ ခံရမည် link
- တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့၍ တိုက်ပွဲဝင်ရန် ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဇော တိုက်တွန်း link
- Myanmar to restrict drafting constitution, link
- Myanmar rejects calls to include Suu Kyi in reforms, link
- China dam projectaboost for Myanmar junta: report, link
- တပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့စည်းရန် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော တိုက်တွန်း link
- ရေကာတာတည်ဆောက်မှု ရလဒ်များ တင်ပြထားသည့် စစ်ဖိနပ်အောက်က ရွှေလီမြစ် စာအုပ်ဖြန့်ဝေ link
- စစ်အစိုးရလက်မခံသဖြင့် ကုလအရာရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရတော့မည် link
- ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာဘောလုံးအသင်း ထိုင်းကိုပွဲဦးထွက်ရှုံးနိမ့် link
- ထိုင်းတွင် ပါတီစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် အမတ်လောင်း လုပ်ကြံခံရ link
- တရုတ်ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေလိုက်နာရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားသူများ တောင်းဆို link
- ကုလဌာနေကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံမှ မနက်ဖြန်ထွက်ခွာ ရတော့မည် link
- ထိုင်းဘုရင့်မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြု၍ ထိုင်းအကျဉ်းသားများကို မြန်မာစစ်အစိုးရလွှတ်ပေး link
- France and Britain Call for Dialogue in Burma, link
- အရှင်ဂ္ဘီရ၏ ခမည်းတော် ဦးမင်းလွင်ပျောက်ဆုံးနေသောကြောင့် ဇနီးသည် စိုးရိမ်ပူပန်နေ link
Posted by Nyein Chan Aung at 6:35:00 PM0comments
အိုဘယ့် အမှောင်မိုက်ဆုံး ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ
ဗုဒ္ဓကို မိစ္ဆာက စစ်ကြေငြာလိုက်ပြီ
ခွေးသူတောင်းစားတွေကို ငါတို့ မောင်းထုတ်ကြရမယ်
မွေးလာကတည်းက သေဆုံးနေခဲ့ပြီးသား ငါတို့အတွက်
သေရင်မြေကြီး ရှင်ရင်ရွှေထီးဟေ့။ ။
၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by Nyein Chan Aung at 5:25:00 PM2comments
- အရှင်ဂမ္ဘီရ၏ခမည်းတော် ဦးမင်းလွင် အဖမ်းခံရသည့် အပေါ်သုံးသပ်ချက် link
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်မမေမီဦးအပါအ၀င် (၁၃) ဦးခန့်လွှတ်ပေး link
- မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကြီးအား ဇာတိရပ်ကို ပြန်ပို့ ရန်စစ်အစိုးရပြင်ဆင် link
- ပွင့်လင်းရာသီမှာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားကျဆင်း link
- ရန်ကုန်မှ ပိုစတာတိုက်ပွဲ link
- စစ်အစိုးရရဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကူးစက်နူန်းကျဆင်းဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အပေါ် ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တို့ သံသယရှိ link
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အလေးအနက်ထားရန် ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ် ခေါင်းဆောင်များ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်း link
- ကိုယ်ဝန် (၅) လကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မမေမီဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက် link
- Russian Officials Claim High Voter Turnout, link
- World leaders call for Burma dialogue with opposition, Driving for Burma, link
- World leaders call for Myanmar dialogue with opposition, link
Posted by Nyein Chan Aung at 3:19:00 PM0comments
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်၏ ရာဇ၀င် link
- ခွန်ထွန်းဦးအပါအ၀င် ရှမ်းခေါင်းဆောင်(၃) ဦး ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးဝါး link
- ဒေါ်စုကြေငြာချက်ထောက်ခံလက်မှတ်ထိုး လူပ်ရှားမူအတွက် တိုက်တွန်းချက် link
- နိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်နွယ်သူများကို ဘာသာရေးပိတ်ပင် link
- ကိုဌေးကြွယ်မိခင်ဈာပနကို တနင်္လာနေ့တွင် ရေဝေး၌ကျင်းပမည် link
- ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များ link
- ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ၌သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကိုကိုဝင်း တလပြည့်ဆွမ်းသွတ်မည် link
- ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝေဒနာရှင်များ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေ link
- ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားလေးဦး အသတ်ခံရ link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရ ချိတ်ပိတ်ခြင်းအပေါ်ကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာ ရူတ်ချ link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်အပိတ်ခံရခြင်းအပေါ် သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန် ရူတ်ချ link
- World AIDS Day, link
- Leaders Claim Success on World AIDS Day, link
- UN Envoy Denounces Burma's Closure of Monastery, link
- Gambari denounces closure of monastery used as AIDS hospice, link
Posted by Nyein Chan Aung at 10:26:00 AM0comments